उम्मेदवार बन्न चाहनेहरु अन्यौलमा | eAdarsha.com
उम्मेदवार बन्न चाहनेहरु अन्यौलमा
नेपाली कांग्रेस पार्टीको चुनावलाई त्यसै पनि महत्वका साथ हेर्ने गरिएको थियो । अहिले झन् सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको पार्टी भएकोले त्यसको चुनाव धेरैको चासो र जिज्ञासाको विषय भएको छ । चुनाव निर्धारित मितिमा भएन । चुनावको म्याद थपिदै गयो । थपिदा–थपिदै विधानले दिएको म्याद पनि समाप्त भयो । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित पार्टीले विधानले दिएको म्याद गुजार्नु आफैमा असहज कुरा हो । पार्टीले त्यो म्याद गुजारेको मात्र होइन, महाअधिवेशन गर्ने भनेर निर्धारित म्याद पनि गुजार्दै छ । महाअधिवेशनको मिति पटक–पटक सार्दै छ । अहिले निर्धारण गरेको मिति पनि अन्तिम हो र त्यही मितिमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने स्थिति छैन । यसैले पनि चुनावको चर्चा बढ्दो छ ।
चुनावको चर्चा हुनु पनि स्वाभाविक छ । एकातिर जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ भने हर्कोतिर क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगाउन सकेको छैन । क्रियाशील सदस्यताको विवाद किस्ताबन्दीमा टुंगाउँदै छ । त्यो विवादका कारण जिल्लाका केही नेताहरु पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा हप्तौं पहिलादेखि अनसनमा बसिरहेका छन् । त्यसले पनि एउटा तमासा थपेको देखिएको छ । स्थिति गम्भीर छ । पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पूर्व र पश्चिम फर्केर बसेका छन् । उनीहरुबीचको विवादले कार्यकर्तालाई अन्यौल र अप्ठ्यारोमा पारेको छ । उनीहरु एउटै पार्टीका भएर पनि गठबन्धनका नेताहरु जस्ता भएका छन् र जे कुरामा पनि भागबन्डा गर्ने गरेका छन् । बाहिर मानिसहरु भागबन्डाले देश बिग्रेको अनुभव गर्दैछन् भने कांग्रेस पार्टीभित्रै भागबन्डा गर्ने गरिएको छ । त्यसले नराम्रो सन्देश सम्प्रेषण गरेको छ ।
यो पटक महाधिवेशन पनि विगतको भन्दा केही फरक किसिमले हुन गइरहेको छ । यस पटक नेताहरुको ‘लेगेसी’ को कुरा पनि चर्कोरुपले उठेको छ । कोइराला परिवारबाट डा. शशांक कोइराला र डा. शेखर कोइराला, गणेशमान सिंहको परिवारबाट उनका छोरा प्रकाशमान सिंह तथा महेन्द्रनारायण निधिको छोरा विमलेन्द्र निधिले सभापतिको दावा गर्दैछन् भने वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा आखिरमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी को हुन्छन् ? भनी नियालिरहेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेल देउवालाई टक्कर दिन सक्ने एकमात्र बलिया नेता आफै भएको बताउँदैछन् । अरु पनि ३÷४ जनाले आफूलाई प्रत्याशीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुको प्रयास कहाँसम्म पुग्ने हो यकिन छैन । कांग्रेसका युवानेताहरु सभापतिको दौडमा प्रस्तुत भएका छैनन् ।उनीहरु आपूmलाई महामन्त्रीमा सीमित गर्दैछन । महामन्त्रीको उम्मेदवारी पनि कुन समूहबाट दिने भन्ने प्रष्ट घोषणा गरिएको छैन । क्रियाशील सदस्यताको विवाद नटुंगिएको र जिल्ला अधिवेशनहरु सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेकाले अरुहरु मात्र होइनन्, स्वयं कांग्रेसका नेताहरु पनि अन्यौलमा छन् । नेताहरुले कुन पदमा कसरी उम्मेदवारी दिने भनेर प्रष्ट भएका छैनन् ।